कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टी? : घनश्याम भूसाल - Nepal Readers
in मत-अभिमत, विचार, विमर्शका लागि
नेकपाका एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसालले कान्तिपुर दैनिकमा केही वर्षअघि ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू?’ शिर्षकको लेख लेख्नुभएको थियो । सो लेखको सार्न्दभिकता आज पनि उस्तै छ :
प्राचीन युनानी मिथकका दुई पात्रबाट छलफल सुरु गरौं । एउटा पात्र नार्सिसस् हो, जसको जिन्दगीका अपार सम्भावना छन्, तर एउटा श्रापले गर्दा उसले आफ्नो अनुहारको प्रतिविम्ब हेर्नु हुँदैन । कुनै दिन जङ्गलमा पानी खोज्दै जाँदा उसले पोखरीमा आफ्नो अनुहार देख्छ । उसको सुन्दरता यति आकर्षक थियो कि त्यो दृश्यबाट उसले आफूलाई हटाउनै सकेन, हेरिरह्यो, हेरिरह्यो र मर्‍यो । अर्को पात्र फिनिक्स चरो हो । यो चरोको आयु ५/७ सय वर्ष छ । तर जब उसको आयु पुग्छ, आगोमा जलेर खरानी हुन्छ र त्यही खरानीबाट त्यो ब्युँतिन्छ । र फेरि जीवनको अर्को चक्र पहिलेझैं सुरु गर्छ । नार्सिसस्ले आत्मरतिको घेराबन्दीमा कसरी व्यक्ति र संस्थाहरू मर्छन् भन्ने बताउँछ भने फिनिक्सले हरेक नयाँ युगमा आफूलाई अनुकूलन गर्दै कसरी व्यक्ति र संस्था बाँच्न सक्छन् भन्ने बताउँछ । नेकपाले अहिले पाएको राजनीतिक सफलता इतिहासमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पाएको भन्दा ठूलो छ । यो सफलताले नेकपा ‘आफ्नो रूप हेरी–हेरी, आफैं हुन्छु दङ्ग’ हुँदै नार्सिसस्जस्तै सकिने त होइन ? वा नयाँ शक्ति र जीवनका साथ फिनिक्सझैं अगाडि बढ्छ? नेकपाका अगाडि यी दुइटै सम्भावना एकसाथ खडा छन् ।
दुई, एक सय वर्षको दुनियाँको इतिहासमा निर्वाचनद्वारा संसद् र सरकारमा सर्वाधिक बलियो बनेको कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद ल्याउँछ भन्ने कुरालाई सिद्धान्त र व्यवहारमा स्थापित गर्नेछ ।
नार्सिसस्को बाटोका लागि नेकपाले केही नगरे पुग्छ, आत्मरतिमा रमाइरहे पुग्छ, जे गर्नुछ, अरूले नै गरिदिन्छन्, अरू नै हिँडिदिन्छन् । फिनिक्सको बाटो आफैले हिँड्नुपर्छ, हिँडेको अभिनय गरेर हुँदैन, प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
नेपाल: कहाँ छ सङ्कट?
२०४६ सालपछि सत्तामा आएको नेपाली काङ्ग्रेस राजाले सुरु गरेको दलाल पुँजीवादकै बाटोमा हिँड्न थाल्यो । पहिलेको मध्यम वर्गीय काङ्गेस पार्टी, जसमा समाजवादको आकर्षण थियो, क्रमशस् दलाल पुँजीवादी हुँदै गयो । विरोधबाट नतर्सिने, नडराउने, गर्नु–नगर्नु सबै गर्नसक्ने, समाजवाद, मूल्य, नैतिकता, आदर्शजस्ता रुढीग्रस्त विचारले प्रभावित नहुने विशुद्ध ‘आधुनिक’, ‘वैज्ञानिक’ जमात नेतृत्वमा भरिन थाल्यो । सरकार, संसद्, अदालत, कर्मचारितन्त्र सबै ठाउँमा तिनीहरूको वर्चस्व स्थापित हुँदै गयो ।
त्यसका लागि नयाँ कीर्तिमानी काङ्ग्रेसीहरू चाहिन्थ्यो । तिनै काङ्ग्रेसले जे सोच्छन् वा जे गर्छन्, त्यही राष्ट्रियता, त्यही प्रजातन्त्र, त्यही समाजवाद हुँदै गयो । यसरी नेपाली इतिहासको एउटा ज्युँदो–जाग्दो पार्टी क्रमशस् विचारहीन, सिद्धान्तहीन, उद्देश्यहीन हुँदै गयो । जुन अनुपातमा पुरानो ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ नेपाली काङ्गेस मर्दै गयो, नयाँ दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेस झन्–झन् जवान हुँदै गयो ।
एच जी वेल्सको एउटा मार्मिक कथा छ, ‘प्रेमको मोती’ । एउटा राजकुमारले असाध्यै माया गरेकी राजकुमारीको मृत्यु हुन्छ । शोकसन्तप्त राजकुमारले प्रेयषीको सम्झनामा उनको लास मणिमाणिक्य जडित बाकसमा राख्छन् र त्यो बाकस राख्ने एउटा भव्य स्मारक बनाउन लगाउँछन् । बनाउँदै जाँदा त्यो स्मारक आफैमा यति भव्य बन्छ कि लासको बाकस त्यहाँ राख्दा स्मारकको भव्यता कम हुने भयो । शोकाकुल राजकुमार स्मारकको भव्यता रोज्ने कि प्रेयसीको लास भन्ने द्विविधामा पर्छन् । अन्ततस् राजकुमार स्मारकको सौन्दर्यका लागि लासको बाकस हटाउने निर्णय गर्न पुग्छन् । दलाल पुँजीवादको भव्यताले नेता र पार्टीलाई विस्तारै ख्वाउँदै–पिलाउँदै, नाच्दै–हसाउँदै आफ्नो दरबारको ढोकामा पुर्‍याउँछ, जहाँबाट हेर्दा आफ्नो उद्देश्य वा सिद्धान्तभन्दा दलाल पुँजीवादको तिरिमिरी जीवनको महानतम उपलब्धि लाग्छ । वस्तुतस् ‘प्रेमको मोती’ राजा–काङ्ग्रेसको उत्थान र पतनको कथा हो, दलाल पुँजीवादसँग लहसिने भविष्यका राजा–काङ्ग्रेसको पनि कथा हो ।
कस्तो छ, नेकपा?
कुन बाटो हिँड्छ?
यसरी अहिलेको दलाल पुँजीवादका ठाउँमा उत्पादकरराष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने र उत्पादित राष्ट्रिय वैभवको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कुरामा पनि प्रायस् सहमति छ । यस विचार–शृङ्खलालाई माक्र्सवादी सिद्धान्तको ढाँचामा व्याख्या गरेर नेकपाले ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने’ कार्यभार निर्धारण गरेको हो । त्यस्तो पार्टी–सिद्धान्तले ‘काम गर्न सक्नेलाई काम र नसक्नेलाई संरक्षण’को प्रत्याभूति गर्ने राज्यको परिकल्पना गर्छ ।
त्यस्तो राज्य निर्माणको कार्यभार बोक्नेसङ्गठनले मात्रै नेकपालाई राजा–काङ्ग्रेसबाट छुटयाउँछ । त्यसो गर्न नसक्दा नेकपाको सङ्गठन पनि राजा–काङ्ग्रेसको जस्तै हुनेछ, राष्ट्रिय ढुकुटीमा जुकाझैं टाँसिएको परजीवी सङ्गठन! स्वर्गको ठेगाना, नर्कको बाटो! फेरि अस्थिरता ! फेरि महावीर दैत्यको रौद्र ताण्डव!
राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने पार्टी कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामीले बेला–बेला चर्चा गर्दै आएका छौं । त्यसका तीनवटा मुख्य विशेषता हुन्छन्– एक, हरेक सदस्य आफ्नो उत्पादनमा बाँच्छन् ।
त्यस्तो पार्टीका जनसङ्ठन पनि रूपान्तरित हुन्छन् । पढ्नेहरूको सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन हुन्छ, अगुवा अनुसन्धाताको बुद्धिजीवी सङ्गठन हुन्छ, युवाको उत्पादक क्षमता बढाउन विभिन्न अभियान चलाउने नौजवानको युवा सङ्गठन बन्छ । महिला सङ्गठनले किशोरी–युवतीलाई आफ्नै खुट्टामा बाँच्न सक्ने, सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउन थाल्नेछ, पढाउनेहरूको सङ्गठन शिक्षक सङ्गठन हुनेछ । पत्रकारिता गर्नेहरूकै पत्रकार सङ्गठन हुनेछ । सेवा दिने क्षमता वृद्धि गर्नु कर्मचारी सङ्गठनको एकमात्र काम हुन्छ ।
माक्र्सले दर्शनशास्त्रमा गरेको एउटा महान योगदान के हो भने उनले इतिहास कस्तो छ, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको अकाटय र असाध्यै सजिलो उत्तर दिए– मान्छेले जस्तो बनाए इतिहास त्यस्तै बन्यो, मान्छेले जस्तो बनाउँछन् भविष्य त्यस्तै बन्छ । नेकपा नार्सिसस्को बाटो हिँड्ला कि फिनिक्सको बाटो भनेर सोधिएको भए माक्र्सले निस्सन्देह भन्ने थिए– यो प्रश्न तिनीहरूलाई नै सोध, उनीहरू कुन बाटो हिँड्न चाहन्छन् ।